ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်သော ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့်မိတ်ဖွဲ့ရခြင်းထက် သာ၍ ကျေနပ်ဖွယ် ကောင်းသောအရာ ဤကမ္ဘာပေါ်တွင် မရှိပါ။ စကြာဝဠာကို ဖန်ဆင်းခဲ့သော ဘုရားသခင် နှင့် ပုဂိ်္ဂုလ်ရေးအရ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုရှိခြင်းသည် သင့်ဘ၀ရှိ လိုအပ်ချက်တိုင်းကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ယေရှုက ““ငါမူကား သိုးတို့သည် အသက်လွတ်ရုံမက၊ အထူးသဖြင့် အသက်နှင့် ပြည့်စုံစေခြင်းငှာ လာသတည်း”” ဟုဆိုသည်။ ယော ၁၀း၁၀
ထူးခြားကောင်းမွန်သောအဆင့် (၅) ဆင့်
(၁) ကျွန်ုပ်သည် ဒုစရိုက်ကိုပြုခဲ့ပြီ။
(၂) ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်အားချစ်သည်။
(၃) ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်အတွက် အသေခံခဲ့သည်။
(၄) သူကို လက်ခံရယူသည်။
(၅) ကျွန်ုပ်၌ ထာဝရအသက်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ၀ကို ခရီးတစ်ခုအနေဖြင့် တွေးကြည့်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် ဝေးရာသို့ သွားခဲ့ ကြသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့နောင်တရသောအခါ၊ ဘုရားသခင်ဘက်သို့ ပြန်လည်ဦးတည် လိုက်သည်။ ကယ်တင်ခြင်းကို အဆင့် (၅)ဆင့်အား ဖြတ်ကျော်ခြင်းအနေဖြင့် တွေးကြည့်နိုင်သည်။ ထိုအဆင့် (၅)ဆင့်ကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။ ခရစ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံခြင်းက ဘာကိုဆိုလိုသည်ကို ဤအဆင့် (၅)ဆင့်က ပြသမည်။ အောက်ဆုံးအဆင့်မှ စတင်၍ အဆင့်တိုင်း ကို ဖတ်ပါ။ ယခုတွင် အဆင့်တစ်ခုစီကို လေ့လာ၍ ဘာကိုဆိုလိုကြောင်းကို ပြောပါမည်။ အဆင့်တစ်ဆင့် စီတိုင်းအတွက် ကျမ်းတစ်ပုဒ်ကို အသုံးပြုပါမည်။
(၁) ကျွန်ုပ်သည် ဒုစရိုက်ကိုပြုခဲ့ပြီ
““လူအပေါင်းတို့သည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ အသရေပျက်ကြပြီ”” ရော ၃း၂၃ ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အား ဤသို့ပြောနေသည်။ ““ငါသည် အပြစ်တစ်ခါမှမလုပ်ဖူးတဲ့ လူကောင်းများ ကို ရှာနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ လူသား အားလုံးဟာ အပြစ်သားများဖြစ်ကြသည်ကို ငါသိ၏။ မိမိဟာ အပြစ်သား ဖြစ်ကြောင်းကိုသိပြီး ငါ့ထံသို့ ပြန်လာလိုသူများကို ငါရှာနေခြင်းဖြစ်သည်။ ငါသည် မည်မျှကျေးဇူးတော်နှင့် ကြွယ်ဝပြည့်စုံသည်ကို ထိုသူအားငါပြမည်။ သူ့အတွက် အရာရာ တိုင်း ကို ငါလုပ်ဆောင် လိမ့်မည်””
(၂) ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်အားချစ်သည်
““ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ ထာဝရအသက်ကို ရစေခြင်းငှာ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌ တပါးတည်းသောသားတော်ကို စွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင် လောကီသားတို့ကို ချစ်တော်မူ၏”” ယော ၃း၁၆
ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်သားများဖြစ်ကြသောကြောင့် ကယ်တင်ရှင်တစ်ဦးကို လိုအပ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ရှင် အဖြစ် ဘုရားသခင်က သူ့သားတော်ကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ဤကျမ်းပုဒ်ကို နောက်တစ်ခေါက် ဂရုတစိုက်ထပ်ဖတ်ပါ။ ““လောကီသား””ဟု ဘုရားသခင်က ဆိုရာ၌ မည်သူတို့ကို ဆိုလိုသနည်း? လောက ရှိ လူအားလုံးကိုဆိုလိုသည်။ သင်လည်း အပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ ““သူအပေါင်းတို””ဟု ဆိုရာ၌ မည်သူတို့ကို ဆိုလိုသနည်း? ဘုရားသခင်က ““မည်သူမဆို””ဟုဆိုလိုသည်။ သင်လည်းပါဝင်သည်။ သင်၏နာမည်ကို ဤကျမ်းပုဒ်ရှိ ကွက်လပ်ထဲတွင် ထည့်နိုင်သည်။ ယခုပင် လုပ်ကြည့်ပါ။
““ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သော --------- သည် ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်။ ထာဝရအသက် ကို ရ စေခြင်းငှာ၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၏တပါးတည်းသောသားတော်ကို စွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင်-------ကို ချစ်တော်မူ၏””။
သင့်နာမည် ကွက်လပ်ထဲထည့်ပြီးနောက် ဤကျမ်းပုဒ်ကို ထပ်ဖတ်ကြည့်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် သင့်ကိုချစ်ပြီး ထူးခြားကောင်းမွန်သော လက်ဆောင်တစ်ခုကို သင့်အားပေးထားကြောင်းကို ဤကျမ်းပုဒ်က ပြောနေသည်။ ဘုရားသခင် က သင့်ကိုပေးသော လက်ဆောင်မှာ အဘယ်နည်း? သူသားတော်ပင် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် သင့်ကို ချစ်ပြီး သင်၏ကယ်တင်ရှင်နှင့် သခင်အဖြစ် သခင်ယေရှုကို သင့် အားပေးအပ်ခဲ့သည်။
““ငါတို့သည် အပြစ်ရှိစဉ်ပင် ခရစ်တော်သည် ငါတို့အတွက် အသခံတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို အဘယ်မျှလောက် ချစ်တော်မူသည်ကို ငါတို့အားထင်ရှားစွာ ပြတော်မူ၏”” ရောမ ၅း၈
ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ရှိစဉ်ပင် ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့ကို ချစ်ကြောင်းကို ဤကျမ်းပုဒ်က ပြောပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက် ကားတိုင်ပေါ်၌ အသေခံရန် သူ၏သားတော်ကို ပေးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အားလုံးတို့ကို ကားတိုင်ထက်ရှိ သူ့သားတော်ပေါ်၌ စုပုံတင် ထားခဲ့သည်ဟု ကျမ်းစာကဆိုသည်။ ယေရှု၌ အပြစ် လုံးဝမရှိသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို ထမ်းထားခဲ့သည်။ ယေရှုသေသောအခါ သူက ““ဤအမှုပြီးပြီ””ဟု အော်ဟစ်ခဲ့သည်။ သူလာလုပ်သောအလုပ်ကို လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ၏ အဖိုးအခကို သူပေးချေခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက် အသေခံခဲ့သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှုအား ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံသောအခါ၊ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကို ဖြောင့်မတ်စွာဖြင့် ခွင့်လွှတ် ပေးနိုင် သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို ကျော်ကြည့်သွားခြင်း မဟုတ်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သွန်းခဲ့သော သူ့သားတော်၏အသွေးတော်ကိုမြင်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ၏အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက် အသေခံခဲ့ရုံမက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်ရှင်သော ကယ်တင်ရှင်နှင့် သခင်အနေဖြင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည်။ သူသည် ကောင်းကင်ဘုံသို့ ပြန်တက်သွားခဲ့ပြီး ယခုတွင် ဘုရားသခင်၏ လက်ျာလက်တော်ဘက်၌ နေရာချထားခြင်းခံရသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်ဘုံနှင့် မြေကြီးရှိ တန်ခိုးအာဏာ အားလုံး ကို သခင်ယေရှုအား ပေးထားသည်။ သင်၏အပြစ်များ ကို ခွင့်လွှတ်ရန်နှင့် သင့်အားဘုရားသခင်၏ သားသမီး တဦး ဖြစ်လာအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်မည့် တန်ခိုး သူ့၌ရှိသည်။
(၄) ကျွန်ုပ်သည် သူ့ကိုလက်ခံသည်။
““ထိုသူကိုလက်ခံသမျှသောသူတည်းဟူသော ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်သောသူတို့အား ဘုရားသခင်၏ သား ဖြစ်ရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူ၏”” ယော ၁း၁၂
ဘုရားသခင်၏ သားသမီးတဦး မည်သို့ဖြစ်လာနိုင်သည်ကို ဤကျမ်းပုဒ်က ပြောပြသည်။ သခင် ယေရှုကို သင်၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံခြင်းအားဖြင့် သင်သည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးတဦး ဖြစ်လာသည်။ ဘုရားသခင်၏ သားသမီးတဦးဖြစ်လာနိုင်ရန်အတွက် သင်ယုံကြည်ရမည့် အရာတစ်ခုနှင့် လက်ခံရမည့်သူတဦးရှိသည်။ သင်လက်ခံရမည့် သူ မှာ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် သင်၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် သင့်အား ပေးအပ်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သော် လည်း၊ သင်သည် သူ့ကိုလက်ခံရမည်။ သင်သည် သူ့ကို သင်၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံသောအခါ သင်ဟာ ဘုရား သခင်၏သားသမီးတဦး ဖြစ်လာသည်။
သခင်ယေရှုကို ကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် မည်သို့ယုံကြည်လက်ခံရမည်နည်း? သင်၏ စိတ်နှလုံး အတွင်းသို့ သူ့အားဝင်ရောက်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်းအားဖြင့် သင်၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် သူ့အား ယုံကြည်လက်ခံသည်။ သင်၏ စိတ်နှလုံး သည် တံခါးပေါက်ရှိသောအိမ်နှင့်တူသည်။ သခင်ယေရှုက ““ငါ သည် တံခါးရှေ့မှာရပ်၍ ခေါက်လျက်နေ၏။ အကြင် သူသည် ငါ၏အသံကိုကြား၍ တံခါးကိုဖွင့်အံ့။ ထိုသူ ရှိရာသို့ ငါဝင်၍””ဟုဆိုသည်။ ဗျာ ၃း၂၀
““သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူသည် ထာဝရအသက်ကိုရ၏”” ယော ၃း၃၆
သင်သည် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ပါက၊ ထာဝရအသက်ကိုရသည်ဟု ဤကျမ်းပုဒ်က ပြောပြထားသည်။ ဤကျမ်းပုဒ်ကို ကျယ်ကျယ်ဖတ်ကြည့်ပါ။ ““သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူသည် ထာဝရအသက်ကို ရ၏””
ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အဆင့်(၅) ဆင့်ကို ရှင်းပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုကို သင်၏ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်လက်ခံရန် သင်ဟာ အသင့်ဖြစ်ပြီးလော? သင်သည် ယခုပင် လုပ်နိုင်ပါသည်။ ဤအခြင်းအရာသည် သင်နှင့် သခင် အကြားရှိ ကိစ္စသာဖြစ်သောကြောင့် သင်တဦးတည်း နေနိုင်မည့် တိတ်ဆိတ်သောနေရာကို ရှာနိုင်ပါက အကောင်း ဆုံး ဖြစ်ပေမည်။ ယခုတွင် သင်ဟာ သခင်ယေရှုအား စကားပြောရန် အသင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။ အဆင့် တစ်ဆင့်စီ တိုင်းကို သေချာပြန်လည် တွေးတောဆင်ခြင်ပြီး စကားများကို ငြင်သာစွာပြောပါ။
၁။ ကျွန်ုပ်သည် အပြစ်ဒုစရိုက်ကိုပြုခဲ့ပြီ။
သခင်ယေရှု၊ ကျွန်ုပ်ဟာ အပြစ်ဒုစရိုက်ကိုပြုခဲ့ပြီဆိုတာကို သိပါ၏။ ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များ အတွက် ကျွန်ုပ်သည် အမှန် တကယ် နောင်တရပြီး အပြစ်လုပ်ခြင်းအား ရပ်တန့်လိုပါ၏။
၂။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်အားချစ်သည်။
ဘုရားသခင်၊ ကျွန်ုပ်အားအလွန်ချစ်ပြီး ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များအတွက် သင်၏သားတော်ကို စွန့် လွှတ်ခဲ့သည်အတွက် ကိုယ်တော်၏ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းပါ၏။
၃။ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်အတွက် အသေခံခဲ့သည်။
သခင်ယေရှု၊ သခင်ဟာ ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များအတွက် ကားတိုင်ထက်၌ အသေခံ ခဲ့တာကို အမှန်တကယ် ယုံကြည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်အား အလွန်ချစ်သည့်အတွက် သခင့်အား ကျေးဇူးတင်ပါ၏။
၄။ ကျွန်ုပ်သည် သူ့ကိုလက်ခံရယူသည်။
သခင်ယေရှု၊ ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးအတွင်းသို့ ကျေးဇူးပြု၍ ၀င်ရောက်ပြီး ကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ရှင် အဖြစ် ခံယူပါ။ ယခုတွင် ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် သခင့်အား ယူတင်ဝတ် ဆောင်ပါ၏။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏အပြစ် အားလုံးတို့ကို လွှတ်ပြီးကျွန်ုပ်ကို ဘုရားသခင်၏ သားသမီးတဦးဖြစ်စေပါ။
သင်သည် ယေရှုကို သင်၏စိတ်နှလုံးအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ရန် ဖိတ်ခေါ်သောအခါ၊ သူက ဘာလုပ်လိမ့်မည်ဟု ပြောထားသနည်း? သူက ““ငါဝင်လာမည်””ဟု ပြောထားသည်။ သူသည် ပြောသည့်အတိုင်းလုပ်မည်လော? လုံးဝ လုပ်ပါမည်။ သင်သည် သင်၏စိတ်နှလုံးအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ရန် သူ့အားအလေးအနက် ဖိတ်ခေါ်ပါက သူသည် ၀င်လာမည်။ ယခုတွင် သင်သည် သူနှင့်သက်ဆိုင်သွားပြီး သူသည်လည်း သင်နှင့်သက်ဆိုင်သွားသည်။ ထာဝရကာလ သက်ဆိုင် သွားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
““ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးအတွင်းသို့ဝင်ရောက်ပြီး ကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ခံယူသောကြောင့် သခင်ယေရှုအား ကျေးဇူးတင်ပါ၏။ ကျွန်ုပ်အား ထာဝရအသက်ကို ပေးသည့်အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါ၏”” ယေရှုသည် သင်၏ အပြစ်များ အတွက် အသေခံသည်ကို ယုံကြည်ပြီး သင်၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်လက်ခံပါက သင်သည် ထာဝရ အသက် ကိုရသည်။ သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီ ဖြစ်သည်။ သင်၏အပြစ်များသည် လွှတ်ခြင်းခံရပြီး သင်ဟာ ဘုရားသခင်၏ သားသမီးတဦး ဖြစ်လာသည်။ ထိုမျှလောက် ရိုးရှင်းပါသည်။
ကျွန်ုပ်သည် ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးဆိုတာကို ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်အားသိစေလိုသည်။
ဘုရားသခင်၏သားတော်က လူပုဂိ်္ဂုလ်တဦးအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် လုပ်ခဲ့သောအရာအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင် ခြင်းခံရသည်။ သင်သည်ခရစ်တော်ကို သင်၏ကယ်တင်ရှင်နှင့် သခင်အဖြစ် ယုံကြည်လက်ခံပြီးပါက သင်၌ ထာဝရအသက်ရှိသည်ကို ဘုရားသခင်က သိစေလိုသည်။ ကျမ်းစာက ““ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သော သင်တုိ့သည် ထာဝရအသက်ကို ကိုယ်တိုင်ရသည်ဟု သိစေခြင်းငှာ၊ ဤအရာများကို သင်တို့ အားငါရေး၍ ပေးလိုက်၏။”” ဟုဆိုသည်။ ၁ယော ၅း၁၃
ဤစကားသည် မည်သူ့စကားဖြစ်သနည်း? ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သည့်အတွက် မှန်ကန်ကြောင်းကို ကျွန်ုပ် တို့ သိကြသည်။
ဘုရားသခင်၏ သားသမီးတဦးဖြစ်ရခြင်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အထူးခြားအကောင်းမွန်ဆုံးအရာ တစ်ခုဖြစ်ပြီး သင်အား လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကို ပြောပြပါရစေ။ ကမ္ဘာပေါ်၌ ရှိစဉ်ကာလတွင် သင်၏ဘ၀ဟာ အမြဲတမ်း လွယ်ကူမှာတော့ မဟုတ်ပေ။ ကောင်းကင်ဘုံရှိ သင်၏အိမ်သို့ သွားရာခရီးတွင် သင်သည် ဒုက္ခ၊ ပြသနာများနှင့် ရင်ဆိုင်ရပေမည်။ သို့သော် သင်သည် ကြောက်ရွံ့စရာမလိုပါ။ ဘာကြောင့်နည်း? အကြောင်းမှာ သခင်ယေရှုသည် သင်၏စိတ်နှလုံးအတွင်း၌ အသက်ရှင်လျှက်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူက ဤသို့ကတိပေးထားသည်။ ““ငါသည်သင့်အား ဘယ်တော့မှမစွန့်”” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ဟေဗြဲ ၁၃း၅ခ
ယုံကြည်သူများသည် ခရစ်တော်အားဖြင့် ချစ်မြတ်နိုးခြင်း နှင့် လက်ခံခြင်းကိုခံရသည်။
လူတိုင်းအတွက် အနက်ရှိုင်းဆုံးလိုအပ်ချက်များထဲမှ နှစ်ခုမှာ ချစ်မြတ်နိုးခြင်းကို ခံရရန်နှင့် လက်ခံခြင်းကို ခံရရန် ဖြစ်ကြောင်းကို ပြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှ အများစုသည် အခြားလူများ၏ ချစ်မြတ်နိုးခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်း ကို ခံရရန် အတွက် များစွာ အားထုတ်ကြိုးပမ်းကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်းဆုံးပြုမူပြောဆိုရန် ကြိုးပမ်းကြသည်။ အခြား လူများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ကောင်းကွက်များအားဖြင့် အထင်ကြီးစေလေ့ရှိကြပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ အားနည်းချက်များနှင့် ရှုံးနိမ့်မှုများကိုမူ ဖုံးကွယ်ထားကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဇာတိအစစ်အမှန်က မည်သို့လဲ ဆိုတာကို အခြားသူများက သိသွား လျှင်၊ သူတို့က ကျွန်ုပ်တို့ အား ငြင်းပယ်မည်ကို စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့ကြသည်။
ဘုရားသခင်သည် ချစ်မြတ်နိုးခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်းကို ရရှိရန်လိုအပ်သော ကျွန်ုပ်တို့၏ အနက်ရှိုင်း ဆုံးသော လိုအပ်ချက်ကို နားလည်သဖြင့်၊ သူက ကျွန်ုပ်တို့အား အပြည့်အ၀ချစ်နိုင်ရန်နှင့် လက်ခံနိုင်ရန် အတွက် နည်းလမ်းတစ်ခုကို ပြင်ဆင်စီမံခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်အား ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်လက်ခံသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ခရစ်တော်အတွင်း၌ တည်စေသည်။
ကျမ်းစာက ““ထိုဘုရားသခင်အားဖြင့် သင်တို့သည် ယေရှုခရစ်၌တည်နေကြ၏””ဟုဆိုသည်။ ၁ကော ၁း၃၀
ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်အတွင်း၌ တည်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ချစ်မြတ်နိုးခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်းကို ခံရကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကြည့်သောအခါ၊ ခရစ်တော် အတွင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့တည်နေ သည် ကို တွေ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်အတွင်း၌ တည်သောကြောင့် ထာဝရကာလချစ်မြတ်နိုးခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်း ကို အပြည့်အ၀ ခံရသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းရပြီးတာတောင်မှ၊ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အမှန်တကယ် ချစ်ကြောင်းကို ယုံကြည်ရန်မှာ တခါတရံ အနည်းငယ် ခက်ခဲ့လေ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရန်သူ စာတန်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို စိတ်ရှုပ် ထွေး စေလိုပြီး ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာတော်ကို သံသယ၀င်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ိညာဉ်ရေးအရ လဲကျသောအခါမျိုးတွင်၊ စာတန်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အထူးသဖြင့်နှိပ်စက်လေ့ရှိသည်။ အမှန်တရားမှာ ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်ခဲ့ချိန်၌ပင် ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းကို ဘုရားသခင် ကောင်းကောင်း သိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေကိုပင် သူတွေ့ရှိ ခဲ့သော်လည်း၊ သူ့သားတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အတွက် အသေခံစေရန် စွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင် ကျွန်ုပ်တို့အား ချစ်တော်မူသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုန်ကန်လိုသော သဘောရှိပြီး မုန်းတီးစိတ်ရှိနေချိန်၌ပင် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ် အားချစ်ခဲ့ပြီး ရွေးနှုတ်ကာ သူ့ထံသို့ ခေါ်ဆောင်လာပါက၊ ယခုသူနှင့်သက်ဆိုင်သွားသောအချိန်၌ ကျွန်ုပ် အား ချစ်ခြင်းကို ရပ်တန့် လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင် အပါအ၀င် မည်သူကမျှ ကျွန်ုပ်တို့အား မချစ်တော့ပါဟု ကျွန်ုပ်တို့ခံစားရသော အချိန်များ ကို ဖြတ်ကျော်ရနိုင်သည်။ သို့သော် ခံစားချက်များသည် မှန်သောအချက်အလက်များ မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် အသက်ရှင်ကြပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ခံစားချက်များအားဖြင့် အသက်မရှင်ရကြပါ။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်အား ယုံကြည်ကြပါစို့။ သင်ခံစားရသည်ဖြစ်စေ၊ မခံစား ရသည်ဖြစ်စေ၊ ဘုရားသခင် ပြောသော အရာရာတိုင်းသည် မှန်ကန်သည်။ တမန်တော်ပေါလုက ““ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို ချစ်တော်မူခြင်း မေတ္တာတော် ကို ငါတို့သည်သိ၍ ယုံကြည်ကြ၏””
သင်သည် သခင်ယေရှုကို သင်၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံရယူလိုသော်လည်း၊ တစုံတခုက သင့်ကို နောက်မှ ဆွဲထားသည်ဟု သင်ခံစားရနိုင်သည်။ သင့်တွင်ရှိနေနိုင်သော ပြသနာအချို့ကို လေ့လာ ကြပါစို့။
ဤအရာဟာ အခြားသူတဦးအတွက်လို့ထင်တယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်လို့မထင်ဘူး
သင်သည် ယော ၃း၁၆ကို ဖတ်ပြီး သင်က ““ဤအရာဟာ မှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အတွက် မဟုတ်ဘဲ အခြားသူတဦးအတွက်လို့ ထင်တယ်””ဟုပြောသည်။ သို့သော် ဤအရာဟာ သင့်အတွက်လည်း ဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာက ““ဘုရားသခင်သည် လောကီသားတို့ကို ချစ်တော်မူ””ဟုဆိုရာ၌ သင့်အကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ဟာ လောက ထဲတွင် ရှိသော လောကီသားတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ““ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူ အပေါင်းတို့ သည် ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်။ ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းငှာဟု ဆိုရာတွင်လည်း သင့်အား ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် သင့်ကိုချစ်ပြီး သင့်အတွက် အသေခံရန် သူ့သားတော်ကို စွန့်ခဲ့သည်။ သင်၏ကယ်တင်ရှင် အဖြစ် သူ့အား လက်ခံရန်အတွက် သူက တိုက်တွန်းသည်။
ခရစ်တော်ကို ကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံရယူပါက လူ့ဘ၀ကပေးရန်ကမ်းလှမ်းထားသော အရာများကို လက်လွှတ်ရမှာလား?
မလွှတ်ရပါ။ သူ၏သားတော်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်၊ ဘုရားသခင်နှင့် ပုဂိ်္ဂုလ်ရေးအရ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံ နိုင်ခြင်း ထက် သာ၍ စိတ်လှုပ်ရှားကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောအရာ ဤကမ္ဘာပေါ်တွင် မရှိပါ။ ဘ၀ဟာ အထီးကျန်ပြီး တဦးတည်း ရုန်းကန်အသက်ရှင်ရမည့်အရာ ဖြစ်စရာ မလိုပါ။ ခရစ်တော် အုပ်စိုး နေပါက၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ကောင်းလှ သည်။ သူစီမံထားသော ပုံစံမှာလည်း ဤပုံစံပင်ဖြစ်သည်။ ယေရှုက ““ငါမူကား၊ သိုးတို့သည် အသက်နှင့်လွတ်ရုံမက၊ အထူးသဖြင့်အသက်နှင့်ပြည့်စုံစေခြင်းငှာ လာသတည်း။”” ဟုဆိုသည်။ ယော ၁၀း၁၀
ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေမျိုး၌ ကျွန်ုပ်ဟာ ခရစ်ယာန်တဦးဖြစ်လာနိုင်မည်ဟု မထင်ပါ
ခရစ်တော်အား သင်၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံရယူခြင်းဟာ စိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး၊ ဤအခြင်း အရာသည် မည်သည့်အချိန်၊ အခြေအနေတွင်မဆိုဖြစ်နိုင်သည်။ ခရစ်တော်သည် သင့်အားကယ်တင်သောအခါ သင့် အတွင်း ၌ အသက်ရှင်ရန် ၀င်လာသည်။ မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို သူ့အတွက် အသက်ရှင်နိုင်သော အစွမ်းတန်ခိုးကို သင့်အားပေးသည်။ ““လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြစ်များကို ကျွန်ုပ်ဟာ ကျူးလွန်ခဲ့ပြီ။ ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်အား ခွင့်လွှတ် ပေးနိုင် ပါ့မလား?
သင်သည် နက်ရှိုင်းသောအပြစ်နွံထဲသို့ ကျရောက်နေနိုင်သော်လည်း ဘုရားသခင်သည် သင့်အား ပြန်ဆွဲ တင်နိုင်သည်။ သင်သည် ခရစ်တော်ကို သင်၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံရယူသောအခါ၊ ဘုရားသခင်သည် သင်၏ အပြစ်အားလုံးကို လွှတ်ပေးသည်။ ကျမ်းစာက ““ဘုရားသခင်၏သားတော် ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်သည် ငါတို့ အပြစ် ရှိသမျှ ကို ဆေးကြောတော်မူ၏””ဟုဆိုသည်။ ၁ယော ၁း၇ သင်ဟာ အပြစ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမှန်တကယ် နောင်တရ ၀မ်းနည်းခြင်းရှိရန် ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသည်။ အပြစ်ကိုကြောခိုင်းသွားရလောက်အောင် နောင်တရခြင်းမျိုး ဖြစ်သည်။ သင်၏အပြစ်များကို သူထံတွင် ၀န်ချတောင်းပန်ပြီး သင့် အတွက် သွန်းခဲ့သော ခရစ်တော်၏ အသွေးတော်အား ယုံကြည် ပါက၊ သင်၏ အပြစ်များဟာ လွှတ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းကို ဘုရားသခင်က သင့်အား သိစေလိုသည်။ ကျမ်းစာက ““ကိုယ်အပြစ်တို့ကို ဖော်ပြတောင်းပန်လျှင်၊ ငါတို့အပြစ်များကိုလွှတ်၍ ဒုစရိုက်ရှိသမျှနှင့် ကင်းစင်စေခြင်းငှာ ဘုရားသခင် သည် သစ္စာတရားနှင့်၎င်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်း၊ ပြည့်စုံတော်မူ၏””ဟုဆိုသည်။ ၁ယော ၁း၉
ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများက ဘယ်လိုထင်ကြမလဲဆိုတာကို စိုးရွံ့သည်။
သက်တူရွယ်တူများ၏ ဖိအားများအား ကုသရမည့်ဆေးမှာ ယေရှုခရစ်တော်နှင့် သင်၏ဆက်နွယ်မှုသည် သင် ရရှိ နိုင်သော အခြားဆက်နွယ်မှုများထက် များစွာသာ၍ အရေးကြီးကြောင်းကို နားလည်ထားရန် ဖြစ်သည်။ သင်၏ ထာဝရ ပန်းတိုင်သည် သူနှင့်ဆက်နွယ်မှုအပေါ်တွင် မူတည်သည်။ သင်၏မိတ်ဆွေများ က ကဲ့ရဲ့မှာ၊ ဟိုထင် ဒီထင်မှာကို ကြောက် ၍ ခရစ်တော်အားငြင်းပယ်ခြင်းဟာ ၀မ်းနည်းဖွယ်ကောင်းလှ သည်။
ကျွန်ုပ်သည် ဘုရားသခင်ရှိကြောင်းကို မယုံကြည်သလို၊ ငရဲရှိကြောင်းကိုလည်းမယုံပါ။
သင်၏မယုံကြည်မှုသည် ဘုရားသခင်၊ သေခြင်း၊ စီရင်ခြင်း (သို့) ငရဲကို ပျောက်ကွယ်စေမည် မဟုတ်ပါ။ သင် သေဆုံးသည်နှင့် တစ်မိနစ်အတွင်း သင်ဟာ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ခရစ်တော်၏ အထံတော်တွင် ၀မ်းမြောက်နေလျင် ၀မ်းမြောက် နေမည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက သင်သည် ငရဲ၌ ငရဲ၏ထိတ်လန့် ခြောက်ခြားစရာများကို လက်တွေ့ ခံစား နေရမည် ဖြစ်သည်။
ချစ်လှစွာသောမိတ်ဆွေ၊ သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းမခံရဘဲ သေချင်သေမည်။ အချစ်မခံဘဲတော့ မသေပါ။ ဘုရားသခင်နှင့် ဘုရားသခင်၏သားတော်သည် သင့်အတွက်ပင်ဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်တော် အား သင်၏ကယ်တင်ရှင် အဖြစ် ယခုပင်ယုံကြည်ပါ။ အောက်ပါ ဆုတောင်းချက်သည် သင့်ကိုကူညီပေး လိမ့်မည်။
““သခင်ဘုရား၊ ကျွန်ုပ်သည် အပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်သိပါ၏။ ယေရှုခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင် ၏သားတော် ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်၏အပြစ်အတွက် သူအသေခံခဲ့တာကို ယုံကြည်ပါ၏။ သခင်ယေရှု ကျွန်ုပ်၏ ကယ်တင်ရှင် အဖြစ် ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲသို့ ၀င်ရောက်တော်မူပါ။””
အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ် Diane Patmont သည် Skyline High School in Oakland, California အထက်တန်းကျောင်းတွင် ဒရမ်မေဂျာကို ယူထားသော ရေပန်းစားသောသူများထဲမှ တဦးဖြစ်သည်။ သူမဟာ ချောမော လှပပြီး လှပ တက်ကြွရုံသာမက၊ ထူးချွန်ပြီး မိတ်ဆွေများစွာရှိသော ကျောင်းသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူမဟာ ဖျတ်လတ် တက်ကြွပြီး ပျော်ရွှင်စွာနေတတ်သူတဦးဖြစ်သည်။ သို့သော် သူမသည် လေးနက်မှုရှိသော အရာများ အကြောင်းကိုလည်း တွေးတောသည်။ လူ့ဘ၀ရှိ မေးခွန်းကြီးများ၏အဖြေကို သူမ သိလိုသည်။ ငါဘယ်က လာသနည်း? ဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာ ရှိနေတာလဲ? သေဆုံးပြီးရင် ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ?
တစ်ခါတွင် သူမက ဤသို့ပြောခဲ့သည်။ ဤဘ၀တွင် လျှောက်လိုက်နိုင်သည့် လမ်းပေါင်းများစွာရှိ သောကြောင့် ဘယ်လမ်းကို လျှောက်ရမလဲဆိုတာကို ဘယ်လိုသိနိုင်မှာလဲ”” မိတ်ဆွေနှစ်ဦးက သူမအား လမ်းပြခဲ့သည်။ တစ်ညနေတွင် မိန်းကလေးနှစ်ဦးသည် စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်တဦး၏ အတွေ့အကြုံမျိုး ကို ရရှိရန်လိုအပ်သော Diane ၏ လိုအပ်ချက် ကို ခံစားမိခဲ့သောကြောင့် သူတို့နှင့်အတူ ဘုရားကျောင်း တက်ရန် Diane အား ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ ထိုနေရာတွင် ဘုရားသခင်သည် Diane ၏ စိတ်နှလုံးကို စကားပြောခဲ့ပြီး သူမဟာ သူမ၏ပျောက်ဆုံးနေသော အခြေအနေနှင့် ကယ်တင်ရှင်တဦး ကို လိုအပ်သော သူမ၏ လိုအပ်ချက်ကို သိနားလည်ခဲ့သည်။ ၀တ်ပြုစည်းဝေးပွဲပြီးနောက်၊ သူမသည် သင်းအုပ်ဆရာကို သွားတွေ့ခဲ့သည်။ သင်းအုပ်ဆရာသည် ကျမ်းစာကိုဖွင့်ပြီး ““ငါသည် လမ်းခရီးဖြစ်၏။ သမ္မာတရား ဖြစ်၏။ အသက်လည်းဖြစ်၏။ ငါ့ကိုအမှီမပြုလျှင် အဘယ်သူမျှ ခမည်းတော်ထံသို့ မရောက်ရ””ဟုဆိုသော ကျမ်းပုဒ်ကို Diane အား ညွှန်ပြပေးခဲ့သည်။ ယော ၁၄း၆
Diane သည် ဒူးထောက်လျက်၊ သူမ၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် သူမ၏စိတ်နှလုံးထဲသို့ ၀င်ရောက်ရန် ယေရှု ခရစ်တော် အား ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ သူမ၏အပြစ်များဟာ လွှတ်ခြင်းခံရပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် သူမ၌ ထာဝရ အသက်ကို ရ ရှိ ကြောင်းကို ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်က သူမအား လုံးဝယုံကြည်စိတ်ချစေခဲ့သည်။ ““သားတော်ကို ယုံကြည်သော သူသည် ထာဝရအသက်ကိုရ၏”” ယော ၃း၃၆ သူမဟာ ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီ ဆိုတာကို ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် က အာမခံ စိတ်ချစေသောကြောင့် သူမ၏ ၀မ်းမြောက်မှုသည် အကန့်အသတ်မရှိတော့ပါ။
ထို့နောက် နွေဦးအားလပ်ရက်ခရီးထွက်ရန် အချိန်ကျရောက်လာပြီး သူမ၏မိသားစုသည် Iowa ရှိ ဆွေမျိုးများ ထံသို့ လည်ပတ်ရန် စီစဉ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် Diane သည် ခရီးနှင့်ပတ်သက်၍ (မကောင်းတာ တခုခုဖြစ်မည်ဟု) စိတ်ထင့်ခဲ့ပြီး ဤအကြောင်းကိုလည်း အခြားမိတ်ဆွေများကို ဖွင့်ပြောခဲ့သည်။ ““ဤ ခရီးကနေ ငါပြန်လာနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ငါခံစားနေရတယ်။” ဘယ်သူကမျှ သူမ၏စကားကို အလေး အနက်မထားခဲ့ပါ။ ““တစ်ပတ်အတွင်း တွေ့ကြတာပေါ့””ဟု သူတို့က နှုတ်ဆက်ခဲ့သည်။
Diane သည် ခရီးအတွက် ထုတ်ပိုးနေစဉ် ““ငါပြန်မလာနိုင်တော့ရင်၊ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ။”” ခရစ်တော် ငါ့ အတွက် လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကို ငါ့သူငယ်ချင်းတွေ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး သိနိုင်တော့မှာလဲ? ငါစာတစ်စောင် ရေးထားမှပဲ””ဟု သူမဘာသာတွေးခဲ့သည်။ သူမတစ်ခုခုဖြစ်သွားပါက သူမ၏စာကို ရှာတွေ့နိုင်ရန်အတွက် Diane သည် သူမ၏အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းကိုခေါ်ပြီး ဤသို့ပြောခဲ့သည်။ ““ Lynn ငါဒီခရီးကနေ ပြန်မလာ နိုင်တော့ဘူးဆိုရင် စားပွဲပေါ်မျာတင်ထားတဲ့ ငါ့စာကို ယူပြီး အခြားသူတွေကို ဖတ်ပြပေးလို့ရမလား?””
နောက်တစ်ရက်တွင် ဤမိသားစုသည် Nevada တောင်တန်းရှိ ကွေ့ကောက်သောလမ်းများကို ဖြတ်မောင်းချိန်၌ ရာသီဥတုသည် ဆိုးရွားလှသည်။ ဘာမျှမမြင်ရလောက်အောင် သဲကြီးမဲကြီးရွာနေသော မိုးကြောင့်၊ ကားသည် ရုတ်တရက် အထိန်းအချုပ်မဲ့သွားပြီး တာရိုးကိုကျော်ဖြတ်ကာ ထိုးဆင်းသွားသည်။ ကားသည် တောင်အောက်သို့ထိုးဆင်းသွားချိန်၌ Diane နှင့် သူမ၏အစ်မသည် နေရာလဲပြီးခါစဖြစ်သည်။ Diane သည် ကွဲစင်သွားသော မှန်အများစု၏ ပစ်မှတ် ဖြစ်ခဲ့ ရရှာသည်။ အကူအညီများ မြန်နိုင်သမျှ မြန်မြန်ရောက်လာခဲ့သော်လည်း၊ လူနာတင်ယာဉ်သည် ၅-မိုင်အကွာရှိ အနီးဆုံး ဆေးရုံသို့ သဲကြီးမဲကြီး ရွာနေသောမိုးအောက်တွင် မောင်းခဲ့ရသည်။
သွေးလွန်နေသည်အချိန်၌ပင် Diane သည် သူမ၏ကယ်တင်ရှင်နာမည်ကို ခဏခဏရေရွတ်ခဲ့သည်။ ထိုနောက် သူမသည် သူမ၏ဖခင်အား ““အဖေ၊ သမီးသေတော့မှာလား?ဟု မေးခဲ့ရာ သူမ၏ဖခင်က ““သမီး အခြေအနေ ကောင်း သွားမှာပါ””ဟု ဖြေခဲ့သည်။ သို့သော် Diane သည် သူမ သေတော့မှာကို ခံစားမိခဲ့ပြီး အောင်နိုင်သူလေသံမျိုးဖြင့် ဤသို့ပြောခဲ့သည်။ ““သမီးသေရမှာကို မကြောက်ဘူး။ သမီးဘယ်ကိုသွား နေလဲဆိုတာကို သမီးသိတယ်”” လူနာ တင်ယာဉ်သည် ဆေးရုံသို့ ရောက်လုနီးအချိန်လေးတွင်Diane သည် ဤလောကမှထွက်ခွာသွားပြီး သူမ အလွန်ချစ် သော သူမကယ်တင်ရှင်၏ထံတော်ပါးသို့ ရောက်ရှိသွားပြီ ဖြစ်သည်။
ဘ၀ရှိ Diane ၏အကြီးမားဆုံးသောစိတ်ဆန္ဒမှာ ယေရှုခရစ်တော်သည် သူမအတွက် လုပ်ခဲ့သော အရာများကို အခြားသူများကြားသိစေရန်ဖြစ်သည်။ သူမသေဆုံးခါနီးအချိန်လေးတွင် တောင်းဆိုမှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ““ကျွန်မ အတွက် ယေရှု လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာကို လူတိုင်းအား ပြောပြပါ””ဟူသော သူမ၏ ဆန္ဒကို သူမ ရေးခဲ့သောစာအားဖြင့် ဖြည့် ဆည်း နိုင်ခဲ့သည်။
ယခု ၈ နာရီ ၃၅ မိနစ်ခန့်ရှိပြီ။ ဤညဟာ သောကြာနေ့ညဖြစ်ပြီး မနက်ဖြန်မနက်ကျရင်၊ ကျွန်မ တို့ဟာ Iowa ကို ခရီးထွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူတဦးဟာ အနာဂတ်မှာ ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကို မသိနိုင်ဘူး လို့ ခံစားမိတယ်။ ကျွန်မ ဆိုလိုတာက၊ ကျွန်မ မိသားစုနဲ့ ယခုသွားမယ့်ခရီးမှာ ကျွန်မဟာ သေဆုံးသွားနိုင် ခြေရှိပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ကျွန်မအား ဆောင်ရွက်ပြီးစီးစေလိုတဲ့ ကိစ္စများစွာ ရှိသေးတာကြောင့် ကျွန်မ မသေနိုင်သေးဘူလို့လဲ ထင်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ် တကယ်လို့ သေသွားခဲ့ရင် ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးနဲ့ ဤစာကိုရေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ်အတွင်းမှာ ကျွန်မဟာ အလွန်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကို ရှာဖွေသိရှိခဲ့တယ်။ ကျွန်မမှာ ရှိတဲ့၊ ရှိလာနိုင်တဲ့ ပြသနာအားလုံးရဲ့အဖြေကို သိရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာတရားဟာ အရေးကြီးတဲ့အရာ မဟုတ်ဘဲ၊ ကျွန်မရဲ့ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယေရှုခရစ်တော်ကို သိကျွမ်းပြီး သူ့ကိုယုံကြည်ခြင်း ကသာ အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တာကို သိနားလည် ခဲ့တယ်။ ကျွန်မဟာ ကယ်တင်ခြင်းခံရတဲ့ ခရစ်ယာန်တဦး မဖြစ်မီက၊ ကျွန်မရဲ့ဘ၀ဟာ ဟာတာတာကြီး ဖြစ်နေပြီး တစ်စုံ တစ်ခု လိုအပ်နေတယ်ဟု ခံစားခဲ့ရ ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ ကျွန်မဟာ ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိ ခဲ့တာကြောင့် ကျွန်မဘ၀ဟာ ပြီးပြည့်စုံသွားပါပြီ။
သခင်သည် သူတို့၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းကို မသိတဲ့သူတွေအတွက်မူ၊ ကျွန်မပြောတာတွေဟာ စစ်မှန်မှု မရှိဘူးလို့ ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့် ကျေးဇူးပြု၍၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်မ ခံစားခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်မရဲ့ သင်းအုပ်ဆရာနဲ့ စကားသွားပြောကြည့်ဖို့ တောင်းပန်ပါတယ်။ သူကသင့်ကို ပြော ပြပါလိမ့်မည်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကျွန်မဟာ အောက်တိုဘာ ၂၈ နေ့ Church service အပြီးမှာ သူရဲ့ စာဖတ်ခန်းထဲမှာ ရှိနေခဲ့လို့ ပါပဲ။ အဲ့ဒီနေ့က စပြီး၊ သခင်ဟာ ကျွန်မရဲ့နှလုံးသားကို လုံးဝဥဿုန် ပြောင်းလဲ စေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မအတွက် သူလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ အရာတွေနဲ့ သင်သာ သူကိုခွင့်ပြုပါက သင့်အတွက် မည်မျှ သူလုပ်ဆောင်ပေးမည်ကို စကားလုံးများအားဖြင့် ပြောပြ၍ မရနိုင်ပါ။
ကျွန်မရဲ့သင်းအုပ်ဆရာ, Lynn, Leslie, Laurie, ကျွန်မရဲ့ အဖိုးအဖွားတို့နဲ့ သင်စကားသွားပြော ကြည့်ဖို့ အလေးအနက် တောင်းဆိုပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ သွားပြောကြည့်ပါ။ ကျွန်မရဲ့ ကျမ်းစာအုပ်အောက်ရှိ Pat ရဲ့ မျှော် လင့်ခြင်းများ လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ သေတ္တာပေါ်မှာရှိတဲ့ အရာတွေကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျမ်းစာကိုလည်း ဖတ်ပါ။ အထူးသဖြင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းပေါ့။ ကျွန်မ ဘာပြောနေတာလဲဆိုတာကို သိနိုင်ဖို့ ကျွန်မအတွက် ဖတ်ပေးကြပါ။ ပြီးတော့ အဲဒါဟာ ဘာသာတရားမဟုတ်ပါဘူး၊ ဘာသာတရားက သင့်ကို ဘယ်ကိုမှပို့ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ခရစ်တော်က သာ သင့်ကိုကောင်းကင်ဘုံဆီသို့ ပို့ပေးမှာပါ။ ကျော်လွှားစွန့်ပယ်ရမယ့် အမှားများစွာ ကျွန်မမှာရှိတာကို ကျွန်မသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့အကူအညီနဲ့ဆို ကျွန်မလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မဒီခရီးကနေ ပြန်လာတဲ့အခါ၊ ကျွန်မရဲ့ ဘ၀ကို သခင်က မည်သို့ပြောင်းလဲ ခဲ့သည်ကို မှတ်စုစာအုပ်တစ်အုပ် အပြည့် ရေးဖို့ ကတိပေးထားပါတယ်။ ဤသို့ရေးနိုင်ဖို့ ဘုရားသခင်က ကျွန်မကို ဆက်လက်အသက်ရှင်စေဖို့လည်း ဆုတောင်းပါတယ်။
ကျွန်မပြောတဲ့အတိုင်း ကျေးဇူးပြု၍ လုပ်ပါ။ ကျမ်းစာထဲရှိ ဤကျမ်းပုဒ်များကို သတိရပါ။ ၁ယော ၅း၁၁, ၁၂, ၁၃ ““သက်သေခံတော်မူချက်ဟူမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့အား ထာဝရအသက်ကို ပေးတော်မူ၍၊ ထိုအသက်သည်လည်း သားတော်၌ပါ၏။ သားတော်ကို ရသောသူသည် အသက်ကို ရ၏။ ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို မရသောသူမူကား အသက်ကိုမရ။ ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သော သင်တို့သည် ထာဝရအသက်ကို ကိုယ်တိုင်ရသည်ဟု သိ စေခြင်း ငှာ ဤအရာများကို သင်တို့အား ငါရေးပေးလိုက်၏။””
သူသည် ယနေ့တွင် အသက်ရှင်နေပြီး ဆုတောင်းသံများကို အဖြေပေးသည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ သတိရပါ။ သင် သည် အရင်ကမလုပ်ရသေးပါက ယခု ဒူးထောက်လျှက် သင့်စိတ်နှလုံးထဲ၌ သူ့အား လက်ခံပါ။ သင်သည် ထိုသို့ မလုပ် မချင်း၊ ငြိမ်းချမ်းမှုကို သိရှိခံစားနိုင်မှာ မဟုတ်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ လုပ်ပါ။ သူဟာ သင့်ကိုစောင့်နေပါတယ်။ ခရစ်တော်၌ ထားရှိ တဲ့ ကျွန်မရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကို ကျွန်မဟာ သိရှိကြောင်း နှင့် သူသည် အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကို လူတိုင်းအား ကျေးဇူးပြု ၍ ပြောပြပါ။
ကျွန်မရဲ့အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်း Diane by Lynn Jennings
Diane Patmont ဟာ ကျွန်မရဲ့အခင်ဆုံး၊ အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ မိမိတို့ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်များကို ဖလှယ်ခြင်း၊ နှစ်ယောက်ထဲ ချိန်းတွေ့ခြင်း၊ အတူတကွ ဆုတောင်းခြင်းနှင့် နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဖတ်ခြင်း၌ ၀မ်းမြောက်ခဲ့ပြီး သူနှင့်အတူ အချိန်တွေကို ပျော်ရွှင်စွာ ကုန်ဆုံးစေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ အခြားသော မိန်းကလေးတွေ နဲ့ အတူ ကျွန်မတို့ရဲ့ ပါတီပွဲတွေနဲ့ အခြားသောလူမှုရေးအရ တွေ့ဆုံခြင်းများကို ဆုတောင်းခြင်းနှင့် ကျမ်းစာဖတ်ခြင်း အားဖြင့် မကြာခဏ အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ Diane သည် ဘုရားကျောင်း ပုံမှန်တက်ခဲ့သောကြောင့် သခင်ဟာ လူတဦး၏ ဘ၀ကို မည်မျှပြောင်းလဲစေ နိုင်သည်ကို သိရှိခဲ့သော်လည်း၊ ကျွန်မနဲ့အတူ ဘုရားကျောင်း စတက်သည့်အခါ မှ သာ ခရစ်တော်ကို သူမရဲ့ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံဖို့ စတင်ခြေလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ထဲက သူငယ်ချင်းတဦးက ခရစ်တော်နှင့် စပ်လျဉ်း၍၊ မိမိကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချခဲ့သောအချိန်တွင် Diane ကလည်း သူမ၏ ဘ၀တွင် ထိုကဲ့သို့သောဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချရန် အလေးအနက် စဉ်းစားလာခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာလ ၂၈-ရက်နေ့ နံနက်ဝတ်ပြုစည်းဝေးပွဲအပြီးတွင် ကျွန်မဟာ Diane နဲ့အတူ သင်းအုပ်ဆရာရဲ့ စာဖတ်ခန်းထဲသို့ သွားခဲ့တယ်။ ထိုနေရာ၌ သူမဟာ ခရစ်တော်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သူမရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချခဲ့တယ်။ ထိုအချိန်မှစ၍ Diane သည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို အလွန်စိတ် ၀င်စားလာခဲ့သည်။ ကျွန်မတို့ဟာ တယ်လီဖုန်း ပြောတဲ့အခါ၊ ကျမ်းပုဒ်တွေနဲ့ ပရောဖက်စကားတွေကို မကြာခဏ ဆွေးနွေး၊ ဝေမျှခဲ့ပါတယ်။ Diane ဟာ တစ်ပတ်ကိုတစ်ကြိမ် သင်းအုပ်ဆရာနဲ့ စကားပြောပြီး ကျမ်းစာထဲရှိ ကျမ်းပုဒ်အချို့ရဲ့ အဖြေတွေကို ရှာဖွေခဲ့ပြီး၊ ခရစ်ယာန် ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်တာတွေကိုလည်း မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
ဧပြီ ၅-ရက်နေ့ ညနေနှောင်းပိုင်းမှာ ကျွန်မဟာ Diane နဲ့ ဖုန်းပြောခဲ့တယ်။ နောက်နေ့မှာ သူမရဲ့ မိသားစုနဲ့ အတူ Iowa ကို အားလပ်ရက် ခရီးထွက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ သူမက “အကယ်၍ ငါပြန်မလာနိုင် ဘူးဆိုရင်၊’’ ငါ့အခန်းထဲ ကို သွားပြီး ငါချန်ထားခဲ့တဲ့ သက်သေခံချက်ကိုယူပြီး လူတိုင်းကို ဖတ်ပြပါ။ စာကို ဘယ်မှာထားမလဲဆိုတာကို ကျွန်မနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးနောက် စားပွဲပေါ်မှာ ထားခဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ နှစ်ရက်အ ကြာမှာ Diane ဟာ Nevada မှာ ကား မတော်တဆမှု၌ သေဆုံးခဲ့တယ်၊ ကျွန်မဟာ ထိုသတင်းကြားတဲ့အခါ၊ ကျွန်မ အမေကိုပြောပြီး သူမ ရေးခဲ့တဲ့စာကို အရ ယူမယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ ရလည်းရခဲ့တယ်။ ပြောထားတဲ့နေ ရာမှာပဲ စာကိုရှာတွေ့ခဲ့တယ်။
သူမရဲ့ခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး နိမိတ်ဆိုးကို မြင်ခဲ့တာလား? ကျွန်မကတော့ အဲ့ဒီလိုမထင်ပါဘူး။ သခင်ဟာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် Diane ကိုစကားပြောခဲ့တယ်လို့ ကျွန်မ ယုံကြည်ပါတယ်။ ““အကယ်၍ ကျွန်မသာ သေသွားခဲ့ရင်....””ဟု Diane ကပြောရာ၌၊ သူမဟာ သူမ၏သခင်အကြောင်းကို သက်သေခံခဲ့ကြောင်းကို သေချာစေချင် လို့ပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။ ဤကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျွန်မ ဟာ ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ သူငယ်ချင်းတဦးကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီဆိုတာကို သိပေမယ့် သူနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ ရမှာကို ကျွန်မသေချာသိပါတယ်။ အကြောင်းမှာ ကျွန်မဟာ ကျွန်မရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် သခင်ယေရှုကို လက်ခံရရှိထားတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့နှစ်ဦးဟာ ကောင်းကင်ဘုံ မှာ တဖန် ထပ်တွေ့ကြဦးမှာပါ။
၁။ ဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့် ပုဂိ်္ဂုလ်ရေးအရပေါင်းသင်းဆက်ဆံ နိုင်ခြင်းထက်သာ၍ ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောအရာ ဤအရာတွင်မရှိပါ။
၂။ ဘုရားသခင်၏ သားသမီးတဦးဖြစ်လာရန်အတွက် ပထမဆုံးလုပ်ရမည့် အဆင့်မှာ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ဘုရားသခင်ပြောထားသောအရာကို လက်ခံရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် အပြစ်သားများဖြစ်ကြောင်းကို ပြောထားခြင်းဖြစ်သည်။
၃။ ဘုရားသခင်က ““လောကီသားအားလုံးတို့ကို ချစ်တော်မူ””ဟုဆိုရာ၌ ကမ်္ဘာပေါ်ရှိ လူသားအားလုံး ကိုဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပြီး သင်နှင့်ကျွန်ုပ်အပါအ၀င် ဖြစ်သည်။
၄။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို အလွန်ချစ်သောကြောင့်၊ ထူးခြားကောင်းမွန်သောလက်ဆောင် တစ်ခုကို ပေးထားသည်။ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်အတွက် ဘုရားသခင်၏လက်ဆောင်မှာ သူ၏သားတော် ပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ရှင်နှင့် သခင်အဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးအပ်ထားခြင်းဖြစ် သည်။
၅။ ကျွန်ုပ်တို့အား ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးပြီး နာမကျန်မဖြစ်အောင် စောင့်ထိန်းခြင်းအားဖြင့် ဘုရား သခင်သည် သူ၏မေတ္တာကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြသသည်။
၆။ ဘုရားသခင်၏သားသမီးတဦးဖြစ်လာနိုင်ရန်အတွက် သင်ယုံကြည်ရမည့်အရာ တစုံတခုနှင့် လက်ခံရမည့်သူတဦး ရှိသည်။ သင်လက်ခံရယူရမည့်သူမှာ သခင်ယေရှုခရစ်ဖြစ်သည်။
၇။ ယေရှုခရစ်သည် သင့်အပြစ်များအတွက် အသေခံခဲ့သည်ကို ယုံကြည်ပြီး သင်၏ကယ်တင်ရှင် အဖြစ် သူ့အားယုံကြည်လက်ခံပါက သင်၌ထာဝရအသက်ရှိသည်။
၈။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ခံစားချက်ကောင်းနေသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၌ ထာဝရအသက်ရှိသည်ကိုသိ ကြသည်။
၉။ သူ့သားတော်က လူပုဂိ်္ဂုလ်တဦးအနေဖြင့် လုပ်ခဲ့သောအရာအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင် ၏ ကယ်တင်ခြင်း ကို ခံရသည်။ သင်သည် ခရစ်တော်ကို သင်၏ကယ်တင်ရှင်နှင့် သခင်အဖြစ် ယုံကြည်ပါက သင်၌ ထာဝရအသက် ရှိကြောင်းကို ဘုရားသခင်က သင့်အားသိစေလိုသည်။
၁၀။ သက်တူရွယ်တူများ၏ ဖိအားကို ကုသရမည့်ဆေးဝါးမှာ သင်နှင့်ယေရှုခရစ်၏ဆက်နွယ်မှုသည် သင်ရရှိနိုင်သော အခြားသော ဆက်နွယ်မှုအားလုံးထက် များစွာသာ၍ အရေးကြီးကြောင်းကို သိရှိ ထားရန်ဖြစ်သည်။